Mr. Nuurow ? Ciidamada qalabka-sida ee Dowladda ayaa kaalinta ugu weyn ka ah amniga darrada Baay? – Radio Daljir
Agoosto 13, 2013 2:23 b 0
Baydhabo, Aug 13, 2013 – Maamulka dowladda Federaalka ah ee gobolka Baay ayaa cabasho ka muujiyey dhibaatooyinka ka jira gobolka, maamulku waxay si khaas ah eedeyn culus ugu jeediyeen ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ah ee gobolkaas.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Baay Shiine Macalin Nuurow oo ka hadlay arintaasi wuxuu sheegay in ay kaalin weyn ka yihiin amni darrada gobolka ka jirta, ciidamada dowladda federaalka ah gaar ahaan unugyada qalabka sida.
Maamulku wuxuu ciidamada meleteriga aad ugu eedeyey in ay isbaarooyin sharci daro ah dhigteen jidadka waa weyn ee halbowlaha u ah gobolka Bay.
Mr. Nuurow wuxuu ka dalbaday dowladda dhexe in meleteriga la siiyo xuquuqdooda isla markaasna la geeyo xaruumaha ay sida sharciga ah u leeyihiin in ay degaan, taasi oo ah mida keli ah ee looga bixi karo dhibaatooyin dhinaca amniga ah ee gobolka ka jira.
Odoyaasha dhaqanka, maamulka gobolka, iyo kan degmada Baydhabo ayaa is isku mid ah u dalbaday in la helo shuruuc maamula ciidanka dowladda, si ay u joogaan meelaha shaqada ay ka hayaan oo aysan dhibaato ugu geysan shacabka iyo gaadiidka.